ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: February 2013
Capsule Hotel and Sauna နှင့်မြန်မာပြည်ကခရီးသွား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များအတွက် အခန်းလုံလောက်မှု့ မရှိ ခြင်းများကိုတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်သူများသာမက မနီးစပ်သူများပါ သိရှိပီးသား သတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
2012 ခုနှစ်ရဲ့ ၃ လပိုင်းကနေ စလို့ Myanmar Boom ရယ်လိုို့နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတွေက ဆိုကြပါတယ်။
ခုတော့ Myanmar Boom ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်ကျလာပါပီလို့လည်း ပြောကြပြန်ပါတယ်။ leisure market လို့ခေါ်တဲ့ အလည်အပတ် သပ်သပ် ခရီးသွားများဝင်ရောက်လာရန် နှင့် တည်ငြိမ်သော ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖြစ်လာဖို့ကတော့ နောက်ထပ် ၂ နှစ်လောက်တော့ စောင့်ရပါလိမ့်အုန်းမယ်လို့လည်း ဂျပန်နိုင်ငံက ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီးများက ဆိုကြပြန်ပါသေးတယ်။4stars ကနေအထက်ဟိုတယ် တစ်လုံးပီးစီးဖို့ကို အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ကနေ ၄နှစ်လောက်တွက်ချက်ပြသူတွေရှိသလို ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာ ၁၄ထပ် လောက်ဟိုတယ် တစ်လုံးကို ၉လလောက်နဲ့ အပြီးဆောက်တာမျိုး ကိုလည်း ပြောကြပြန်ပါသေးတယ်။ ရုတ်တရက် လုပ်သားအင်အားမလုံလောက်လို့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေ ရပ်သွားရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို လည်းတွက်ချက်ပြပြန်ပါတယ်။
လတ်တစ်လောမှာတော့ ၀ယ်ပီးသားခရီးစဉ်တွေကလွဲရင် နောက်ထပ် အသစ်သော အလည်အပတ် သီးသန့်ဖြင့် လာရောက်မယ့် ခရီးသွားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို ရှောင်လာကြသလို ကျွန်မတို့ဆီကို ခရီးစဉ် စုံစမ်းမေးမြန်းလာသူများဟာလည်း စီးပွားရေးကိစ္စဖြင့်လာရောက်သူမည့်သူတွေ ကပဲ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိပါတယ်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ Business travelers ဧည့်သည်တွေအပေါ်မှာထက် နယ်မြေဒေသအသစ်ကို လာရောက်လေ့လာမည့် sightseeing travelers တွေကိုသာရေရှည်မှီိခိုလို့ရမှာပါ။ Travelers များလာမှသာလျှင် အခြေခံလူတန်းစားတို့ရဲ့ ၀င်ငွေပိုမိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
တည်းမရတဲ့နေရာတွေများလို့ တည်းလို့ရတဲ့နေရာမှာသာ စုပြုံနေခြင်းလို့လည်း မြင်မိပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတို့သည် ရေချိုးရန်နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့် ဆောင်းနား (ချွေးထုတ်ခန်း)ရှိသည်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုပဲ အိပ်ရအိပ်ရ အိပ်နိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ရေချိုးခန်းပါသောဟိုတယ်များတွင်နေသော်လည်း အများသုံး ရေပူစိမ်ကန်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိသည်ဆိုပါက မိမိအခန်းတွင် မချိုးပဲ ရေပူစိမ်ကန်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းတွင်သွားရောက်ချိုးကြသည်ကိုက ဂျပန်လူမျိုးတို့ ၏ အလေ့အကျင့်များဖြစ်ပေသည်။
Capsule Hotel and Sauna ဆိုသော်ဆိုင်းဘုတ်များအား ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီးတိုင်းလိုလိုနဲ့
တိုကျိုမြို့ ရှိဓတ်ရထားလိုင်းပေါ်မှ ဘူတာတွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာတွေမှာ တည်ရှိတတ်ပါတယ်။
ကတ်ပစူးဆေးတောင့်သကဲ့သို့ လုံးဝန်းသော အခန်းအနေထားရှိသလို
အခန်းထဲတွင်နေရာအပိုမရှိအောင် ကျဉ်းမြောင်းစွာတည်ရှိသည်မှာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Luxury Trip မှလွဲ၍ သာမန် ခရီးသွားတို့သည်မိုးလင်းသည်နှင့်ထွက် မိုးချုပ်မှပြန်ရောက်ကြသည်ဖြစ်သည့်အတွက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်၍ လုံခြုံသော ကျေချစရာနေရာတစ်ခုရှိလျှင် ပြည့်စုံပီဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် မိုးချုပ်သည်အထိ အပြင်တွင်၇ှိနေသောသူတို့သည်လည်းကောင်း၊တစ်နယ်မှတစ်နယ်သို့ ညအိပ် အလုပ်ကိစ္စဖြင့်ခရီးထွက်လာရသော နက်ကတိုင်ဝတ် ၀န်ထမ်းမှသည် လူရွယ်ပိုင်းတော်တော်များများကို လည်း ထိုသို့သော Capsule ဟိုတယ်များတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။
Five Stars Hotel, Business Hotels, Capsule Hotel and Sauna, ryokan (ဂျပန်စတိုင်တည်းခိုခန်း)၊ minshuku (ဂျပန်စတိုင် Bed and Breakfast), ( Love Hotels ဟုခေါ်ကြသော ဟိုတယ် အပေါ်ဘက်တွင်နီယွန်မီးချောင်းများထိန်ညီးအောင်ထား၍ ဟိုတယ် အောက်ခြေ နှင့်ခြံစည်းရိုးအား မီး မှိန်မှိန်ထွန်းထားပေးသော ဟိုတယ်အရောင်မှာလည်း ပန်းရောင်များ ခရမ်းရောင်များနှင့်တန်ဆာဆင်ထားသည့်) များစွာ ရှိကြပါသည်။
တိ်ုကျိ်ူမြို့ရှင်းဂျူကုမြို့လည်ခေါင်ရှိ five stars ဟိုတယ်များ ဈေးနှုန်းမှာ နံနက်စာဈေးနှုန်းမပါ ယန်း၂သောင်းကျော်မှစ၍ရှိကာ Business hotel များ မှာ တစ်ညလျှင် နံနက်စာဈေးနှုန်းမပါ ယန်း၇၅၀၀ မှစပါသည်။ five stars ဟိုတယ်များ အခန်းအကျယ်ဝန်းမှာ အနည်းဆုံး 280 sqf ရှိ၍ Business hotel များမှာ
တစ်ယောက်အိပ်ခုတင်တစ်လုံး နှင့်ဘေးတွင် လျှောက်လမ်းသာသာရှိသောအကျယ်အ၀န်းသာရှိလေသည်။
Capsule Hotel and Sauna ဟိုတယ်များမှာကား အောက်ပါပုံအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်၊ ဓတ်ပုံများအား google image မှယူပါသည်။
ဈေးနှုန်းမှာကား နံနက်စာမပါ တစ်ညလျှင် ယန်း၃၈၀၀ မှ ယန်း ၄၀၀၀ထက်မပိုပေ။ အခန်းထဲတွင်ကား တီဗီ၊ နံရံကပ်စာကြည့်မီးလုံးငယ်၊ နံရံကပ် မီးခိုးငွေသတိပေးစနစ်၊ အရေးပေါ်ဓတ်မီးငယ်၊ နံရံကပ် အပူအအေးပေးစက် များတပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။
Five stars hotel မှသည် capsule ဟိုတယ်အထိ တူညီသည်မှာ အနံသက်ကင်း၍ သန့် ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိကာ ပိုးသတ်ထားသော အိပ်ရာခင်းတို့ ဖြင့် ဖြူဖွေးတောင့်တင်းနေမှု့များဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်ရှိ Guest house များ INN များ Motel အများစုတို့မည်သည် Capsule ခန်းထက်သာလွန်သော်အကျယ်အ၀န်းရှိလေသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်လာသူများ၊ ကျောပိုးအိတ်သမားခရီးသွားများနှင့် အတွက်
အိပ်ချိန်ရှည်ကြာစွာမလိုအပ်သူများ အတွက် ကျယ်ဝန်းသောအခန်း နှင့် ပြည့်စုံသော နံနက်စာထက် သန့်ရှင်း၍ သပ်ရပ်သော အိပ်စက်စရာနေရာတစ်နေရာ သာလိုအပ်ပါသည်ဆိုလျှင်
ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောချစရာနေရာ ရောင်းနေသော ဆိုင်းဘုတ်ရွဲ့စောင်းကာ ချေးအထပ်ထပ် ရှိသော လှေကားနှင့် ဟိုတယ်အမည်ခံထားသော၊တည်းခိုခန်းအမည်ခံထားသော အိပ်ယာများစွာတို့အား လုံခြုံ၍ သန့်ရှင်းသော အိပ်ယာအဖြစ်ပြောင်းပေးမည် ဆိုပါက လတ်တစ်လောတွင် လိုအပ်လျှက်ရှိသော အခန်းဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု့ပြသနာ . အခန်းမလုံလောက်မူ့ ပြသနာ များအတွက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မည့်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဂျပန်လူမျိုး အခြေခံဝန်ထမ်းလစာ ၁၄၀၀၀၀ ယန်းမှ တစ်ညလျှင် ယန်း၄၅၀၀ အခန်း တည်းလျှင် တည်းခိုသူမှာသူ့ ဝင်ငွေ၏ ၃.၂ % နှုန်းခန့့်ဖြစ်၍ မြန်မာပြည်ရှိ မြန်မာလူမျိုး အခြေခံ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးလစာ ၇၀၀၀၀ ကျပ်ငွေမှ အနိမ့်ဆုံး တည်းခိုခန်းခ ၆၀၀၀ ကျပ်ဆိုလျှင် ၀င်ငွေ၏ ၈.၅ %နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ နိုင်ငံခြားသားများ တည်းခိုနေသော ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်ရှိ အနိမ့်ဆုံး Guest house များမှာ ခေါင်းအုံး တစ်လုံး စောင်တစ်ထည် အသံမည်သော အဲယားကွန်းနှင့် ဆေးလိပ်နံ စွဲနေသော အခန်းများမှာ တစ်ညလျှင် ၁၁ ဒေါ်လာမှ ၂၅ ဒေါ်လာအထိ ဖြစ်ကြပါသည်။
kosan / ခရီးသွားဆိုသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၏Life and Success ဂျာနယ်တွင် ပါရှိုပြီးဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်တွေ အချိန်ရသလောက်ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကြည်ကြည် at 4:24 AM No comments:
သစ်တောသစ်ပင်ကိုချစ်ခင်လွန်းသူပါ။ တော်ဝင်ပန်းတွေကိုမက်မောတတ်ပေမယ့် လမ်းဘေးက ပန်းသေးသေးလေးတွေချစ်တတ်လွန်းသူပါ။ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ စိုက်ပျိုးရေးသမား၊ ဖြစ်ခဲ့တာကတခြား။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဘ၀ကို ပျော်ရွင်စွာရပ်တည်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်ပေမယ့် ပင်ပန်းစွန့်စားခန်းတွေကို စိန်မခေါ်ရဲသူပါ. သားကအသက်ဆိုသမီးကိုဘ၀လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မှတ်ထားသူပေါ့
ကျွန်မ ရသမပိုင်သလို စာကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရေးတတ်ပါဘုူး။ ကျွန်မဘလော့ကလေးကိုလင့်ပေးထား ကြတဲံ့ ဘလော့လေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်မ အတော်ကို ၀မ်းသာ ကြည်နူးရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သောကအမော မောဟအမော ဘ၀အမော တွေ ထဲမှာ တတ်နိုင် သမျှ ကြည်လင်ချမ်းမြေ့စွာနေချင်ပါသော ကြောင့်ကြည်ကြည်လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေ ဒဏ်ရာများနဲ့ အတိတ်တွေ အဲ့လိုပဲ အောင်မြင်နေတဲ့ပစ္စုပ္ပန် ကျရှံးနေတဲ့ပစ္စုပ္ပန် မျှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့ အနာဂတ် ...စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ အနာဂတ်.... ရင်မှခံစားအရာများစွာကို ဝေမျှရင်ဖွင့်ချင်လို့ စာစရေးမိတာပါပဲ။ အကြိုက်ချင်းတူတာလည်းရှိမယ် မကြိုက်ပါဘုးဆိုတာလည်းရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမောင်ချောနွယ် ရဲ့စကားလို ကျွန်မတို့ လမ်းချင်းတူ လို့ လူချင်းတွေ့ ကြတဲ့ သူတွေပါ.... ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ဘ၀မှာ အချစ်ဆုံး အမျိုးသား
တို့ တွေရဲ့ ရန်ကုန် (အတင်းစကားမဆိုနဲ့ကွယ်)
ရောက်တတ်ရာရာ ဂျပန်မှာ (7)